पनौतीका मेयरः जसले भारतबाट काम गरी फर्केलाइ टेकु पुर्याए « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
पनौतीका मेयरः जसले भारतबाट काम गरी फर्केलाइ टेकु पुर्याए
धुलिखेल, ११ चैतः सोमबार दिउँसो २ बजेतिर पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तारामान लामाले मेयर भिमप्रसाद न्यौपानेलाई फोन मार्फत जानकारी गराए । भारतबाट काम गरि फर्केका गाउँ आइपुगे के गर्ने ? लगत्तै मेयरले दुई वटा एम्बुलेन्सकाे ब्यवस्था मिलाए । र आदेश दिए स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ।
मेयर न्यौपानेको आदेश अनुसार बल्थलीबाट २ जनालाई लिएर दुईवटा एम्बुलेन्स शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुग्यो । उनीहरुको ज्वरो, खकार परीक्षण गरियो । सबै ठिक रहेको डाक्टरहरुले बताएपछि उनीहरु सोहि एम्बुलेन्स बल्थनी नै पुर्यो । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले उनीहरुको निगरानी राखेको छ । घर बाहिर नस्किन आग्रह गरेको छ ।
वडाध्यक्ष तारामान लामाले २ जना आइतबार गाउँ आइपुगेको र अन्य ११ जना गाउँ आउँदै गरेको सुचनाको आधारमा पनौती र गाउँ नपुग्दै अस्पताल लगेर परीक्षण गरेको बताए ।
उनीहरु आइतबार गाउँ आइपुगेका थिए । पनौती नगरपालिकाले सोमबार देखि बसपार्कमा हेल्थ डेक्स राखेको छ । नगरपालिकाले कोरोना संक्रिमतका लागि लक्षित गरेर ४ वटा एम्बुलेन्सत तयारी अवस्थामा राखेको छ । नगरपालिकाभित्रका नागरिकले यो सेवा लिन पाउनेछन् ।
३५ लाखको कोरोना विपद् कोष कडा गरेको नगरपालिकाले वडामा स्तरमा रहेको विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएर बिदेशबाट आएको हरेक नागरिकको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाले खुल्ला क्षेत्र तर्फ पालिकाको वडा नम्बर ५ मा रहेको छाला कारखाना र शिखरप्लाई कारखाना क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइनका लागि तोकेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ७ मा निर्माणधिन क्षेत्रिय रंगशालाई पनि क्वारेन्टाइनका लागि तोकेको छ ।
भवन तर्फ इन्द्रेश्वर र तेजगंगा बहुमुखि क्यम्पसलाई क्वारेन्टाइनका लागि तोकेको छ । त्यसैगरी कुशादेवी क्यम्पसलाई पनि क्वारेन्टाइनका लागि तोकेको बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए ।